KWENZEKA NTONI KUDLIWANONDLEBE? - IINDABA
Kwenzeka ntoni kudliwanondlebe?
Umboniso wasekuseni (okwabizwa ngokuba ziiMfazwe zasekuseni e-Australia nase-Indonesia) ngumdlalo weqonga waseMelika osasaza ingqokelela kamabonakude ene-Jennifer Aniston, Reese Witherspoon,
Kwaye uSteve Carell, owaqala ngoNovemba 1, 2019, kwiApple TV +. Le ngqokelela ichukunyiswa nguBrian Stelter. Incwadi ephezulu yokusa: ngaphakathi kweLizwe leCutthroat leTV yasekuseni.
Umboniso wasekuseni waqala ngokumisela uMitch njengowonzakeleyo kwisindululo se- # MeToo- umntu owasebenzise kakubi amandla akhe ngokwenza imicimbi engaphandle komtshato namantombazana kwaye wagxothwa.
Kodwa ngaphakathi kwesiqendu sesibhozo, esasisebenza njenge-flashback, uMitch ubonakala ngathi sisilo awayesebenza kuso. Wathatha isibonelelo somsebenzi omncinci uHana xa wayemmemela kwigumbi lakhe lokulala kwaye walala naye.
Ngelo xesha, waqaphela ixesha lobusuku njengemvumelwano. Kodwa ngokusebenza ngokukuko okuvela kuMbatha-Raw, ababukeli bayaqaphela kwisiqendu sokugqibela kwaye bagqibezele indlela umothuko welo xesha lobusuku, xa wahlaselwa ngokwesondo ngumphathi wakhe, wamtshutshisa uHana ubomi bakhe bonke. .
Xa izicwangciso zabo zityhilwa, njengenye indlela yokugxothana noAlex no-Chip, u-Ehrin ubhala indawo apho baya kuthi bawele nje iindlela. UAlex ushiya indibano engenathamsanqa kunye nomongameli woluntu (uTom Irwin) njengoko Chip eqhubeka nobuntu bakhe.
Ngokukhawuleza njengoko bebona omnye komnye, baya kuyazi into echaseneyo eyenzileyo. Ukuthula okwesibini kunye nokuthula phakathi kwamabinzana yinto enye endiyifunayo, ndiyayixabisa, kwaye ndizama ukufumana ukhetho lokwazisa ibali, utshilo uLeder.
Ukugubungela uqhankqalazo lwemigodi yamalahle yase West Virginia, intatheli ephantse-yonxweme u-Bradley engaqondanga waya kwintsholongwane xa ummeli amrekhoda ngobuchule erekhoda umntu otyhalele i-cameraperson yakhe.
Emva kwengxabano eshushu kunye nomphathi wakhe, u-Bradley uyeke ixesha elincinci lokuxela, njengoko incwadi ye-TMS uHana ifika ukuba imphembelele ukuba abhabhe aye eNew York City kwaye abonakale njengondwendwe kwi-Morning Show. .
U-Alex wenza udliwanondlebe noBradley, owazibambayo kwaye waqinisekisa ukuba akukho zimpawu zoyikisayo ngalo lonke ixesha lokuhlala phantsi nokuphikisana nentatheli.
Ukusebenza kwakhe kakuhle kwabamba ukuqaphela kukaCorey, kwaye wamnika umsebenzi wokunika ingxelo ngengqeqesho. Kodwa u-Bradley wayirhoxisa indibano yakhe kunye nomvelisi we-govt u-Chip kwaye wayesele eza kumka eNew York xa uCorey esaziwa njengombuza kwindawo efanelekileyo apho uAlex wayezukiswa khona.
Ngayo yonke le drama kwisiqendu 10, lixesha lokuba uMboniso wasekuseni uye kuhlala. Chip amakhonkco uAlex kwaye umshiyele ivoyisimeyili; Ucacisa indlela i-UBA eyayiza kumbulala ngayo kwaye uyiqala ngakuMitch ukuyibeka - yayi lixesha lakho lonke elo.
Njengokuba u-Bradley no-Alex behlanganisene umboniso ngemizuzwana bebala phantsi ngaphambi kokuhlala, uMarlon uzama ukunika aba bafazi amabinzana okhuthazo- uAlex uphosa amanzi eMarlon kwaye uthi F-ok ebusweni bam. yenza.
Umboniso wasekuseni wexesha loku-1, Isiqendu se-10, Udliwanondlebe, kumdlalo wokugqibela, uMboniso wasekuseni uhlala, nangona kunjalo uAlex umisa, esenza uBradley ajongane nayo yonke imikhondo. UAlex uqala ukuhamba enyusa istudiyo, ngelixa iqela elipheleleyo lemveliso lisoyika indlela aziphethe ngayo.
UAlex uqala ukuthetha kwikhamera yedijithali kwaye uyavuma kubabukeli ukuba abathembekanga- le ndawo yahluke mpela kuleyo ibonakala ngathi.
Ngokukhawuleza kuba abasebenzi bayalelwa ukuba babanqunqe, uCorey wamyalela ukuba aphile. UAlex noBradley baphinde bahlangane kwaye bazise ababukeli babo ukuba uFred wenze indawo yokuthula amanenekazi kwaye uphando lwe-UBA olususa isihloko sakhe aluyonyani.
UAlex ukongeza ukwamkela ukuba unoxanduva lokungabizi isimilo. Baye bangena ekuziphatheni okubi ngokwesini kukaMitch kunye nebali likaHana. UFred uzama ukuyeka ukushicilelwa, nangona kunjalo wonke umntu akamhoyi kwaye bayamvala.
Ekugqibeleni, uAlex noBradley banciphisa nangona kunjalo umyalezo uhanjisiwe. Chip ukubukela kwiscreen esikhulu sokubonisa kwiXesha lesikwere ukubona ukuba uMboniso wasekuseni uncitshisiwe. UMitch usekhaya ujonge kwindawo.
Izigaba: Tech-Iindaba Iwiki Iindaba
uphi umkhosi omkhulu
umzukulwana omkhulu wabaphangi veto ophumeleleyo
utam d'agostino jr
ngolwesihlanu wokugqibela 2016 bhanyabhanya